Rita, Writing for My Sake!: ဘလက်ခ်ကော်ဖီ
Posted by Rita at 11/28/2010 11:05:00 AM
ပြည်မှာ ဘောင်းဘီပဲ ဆက်ဝတ်နေမိရင် ဘူးယိုလို့ ကျိန်းသေ အပြောခံရမယ်..။ကိုယ်ကြိုက်မိတာ အပြစ်လား။
တမင်ကြီး ရေချမ်းချမ်းတခွက်ပေးပါ လုပ်တာမှမဟုတ်တာ။
ဇွန်က စလုံးရောက်ပြီးမှ ကော်ဖီမသောက်နိုင် ဖြစ်သွားတယ်။ အလုပ်က ဖိစိမှုးတွေများပြီး ကော်ဖီသောက်မိရင် ရင်တွေပိုတုန်လာလို့...နောက်ဆုံးတော့ မိုင်လိုနဲ့ အစားထိုးသောက်လိုက်ရတာ ခုချိန်ထိပါပဲ။ :D
ဝမှာ စိုးလို့ဆီးချိုဖြစ်မှာစိုးလို့ သကြားမထည့်တာ နို့တော့ထည့်တယ် ခါးလိုက်တာ.
ခုတလော ဘလက်ခ်ကော်ဖီပဲ သောက်မိတယ်။
နို့ ဆီမထည့်ဘူး သကြားတစ်တုံးထည့်ပီးသောက်ပါတယ် ..
နိုင်ငံခြားမှာ နေတဲ့သူလို့ မြင်နေကြလို့လား မသိဘူး... ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတချို့ကို ပြည်တွင်းက သူငယ်ချင်း တချို့က သိပ်ပြီး လက်မခံကြဘူး။ အပေါ်စီးကနေ မကြည့်ပါနဲ့လို့ ပြန်ပြောကြတယ်။ အပေါ်စီးက နှိမ်တဲ့သဘော ကြည့်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်စီးက မြင်တဲ့သဘောကို ချပြမိတာမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် အမြင်တွေ ကွာနေတိုင်း ရန်သူလို သဘောထားကြတာ ခံရခက်တယ်။
မရီတာလဲ တင်ချင်သလိုသာတင်ပါ အတွေးတိမ်တဲ့ ငပိန်ကတော့....
ကော်ဖီဆို နကြိုက်ပါဝူး..... (တိုက်ရင်လည်းသောက်ပါတယ်)